Kalandarkaarku waa qalab wax ku ool ah oo bixiya macluumaadka bulshada, iskuduwidda hawlaha kooxeed, qof kasta oo lagu wargeliyo dhacdooyinka. Waxay ka mid yihiin barnaamijyada ugu badan ee loo isticmaalo dhammaan qalabka.
Waxaad ku dari kartaa jadwalka bog kasta oo ka mid ah boggaaga. Waxaad gali kartaa jadwalkaas dhacdooyinka muhiimka ah ee aad rabto in aad la socotid – ciyaaraha kubadda cagta, maalmaha dhalashada, shirarka macaamiisha, waqtiyada loo qabtay soo gudbinta mashaariicda. Haddii jadwalka lala wadaago koox ama bulsho, waxaad ku cusbooneysiin kartaa dhacdooyinka xiisaha u leh kooxda ama bulshada – iibinta geerashka, xaflad xafiis, u jeedin xubin kooxeed cusub iyo dhacdooyin la mid ah. Jadwalku wuxuu kaa caawinayaa inaad sii wadatid xubnaha beesha ama akhristayaashaada feejignaanta ah in ay ka warqabaan dhacdooyinka soo socda.
Mid ka mid ah habka lagu daray kalandarka waa isticmaalka plugins. Habkani wuxuu kaloo kaa caawin doonaa inaad u habeysid muuqaalka jadwalka ilaa xad. Hab kale oo lagu darayo jadwalku waa adoo ku dari doona jadwalka Google ee boggaaga internetka iyo inaad ku cusbooneysiiso dhacdooyinkaaga. Maadaama inta badan isticmaalayaasha internetka ay mar hore isticmaalaan Google Calendar oo ay yaqaanaan interface, waxaan u qaadan doonaa habkan ujeedadayada.
Waxaad si ballaaran u jajabin kartaa rakibaadkan taariikhda Google ee laba marxaladood,
Abuuritaanka koodh daboolan
Ku darista koodhka codkaagaaga boggaaga WordPress
1 Abuuritaanka Google Taariikhda Codsigooda
2 Ku darista Code Codsigaaga Το WordPress WordPress σας
3 Ημερολόγιο Google Munaasabadaha
Abuuritaanka Google Taariikhda Codsigooda
1. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la isku daro a Calendar Google oo leh boggaaga. Waxaad samayn kartaa tan adiga adoo gali kartid jadwalka Google ee shabakadaada. Waa inaad heshaa shaashad sida kan hoose.
2. Marka xigta, hel jadwalka bulshada. Ka hel liistada hoos udhaca ah ee ku yaal «χρονοκαλέα καλέ» ka dibna ka dooro Kalandarrada xiisaha leh ee bogga.
Liis kalandarrada xiisaha leh ayaa shaashadaada ka soo muuqan doona. Xullo mid kale oo kalandar ah oo xiisa leh adiga oo u qora. Xanaaq, waxaan doortay «ciidaha oromada». Waad arki kartaa jadwalka taariikhda kahor intaanad is qorin. Waadna soo qaadan kartaa intaad jeceshahay dhammaantoodna waxay ku dhegan yihiin jadwalkaaga. Laakiin tababarkan, aan ku bilowno μέσα.
3. Ka dib markii aad dooratid χρονοka taariikhda lagu dhejiyo, dhagsii Xusuus-qorka loo yaqaan «Επιστροφή στο Ημερολόγιο» e shaashadda sare. Waxaad arki doontaa jadwalkaaga oo leh jadwalka ‘Fasaxyada Orthodox’ ee ku lifaaqan.
Ku darista Code Codsigaaga Το WordPress WordPress σας
Hadda waxaan u wareegeynaa marxaladda labaad ee ficilka uu u rogo boggaaga WordPress. Waa inaad gelisaa χρονοκα boggaaga. Haddii aad horey u leedahay Ημερολόγιο Google taariikhda iyo waqtiyada, qaabka ugu fudud ee lala wadaagi karo xubnaha kooxda waa in aad ku soo gashid boggaaga.
1. Tani, fur cusub cusub ka soo WordPress WordPress aad. Riix στο Επεξεργασία iyo dooran qaybta qoraalka ee bogga.
Hadda, ku noqo jadwalkaaga guji kuna dhaji Ρυθμίσεις ημερολογίου dhinaca bidixda.
U fiirso nambarka koodhka sanduuqa yaryar ee dhinaca midig; (fiiri waraaqaha cas ee sawirka kore)
2. Kaar lambarkan, dib ugu noqo bogga cusub ee aad furto oo ku dhajiso halkaas.
Sidoo Kale Ogow στο uu jiro ikhtiyaar ay ku habeynayaan jadwalka. Waxaad riixi kartaa oo waxaad dooran kartaa goobaha aad jeceshahay. Xulashada habeynta ayaa ah mid aasaasi ah mana aha mid guud ahaanba sida kuwa ay ku bixiyaan plugins ama ilaa inta laga rabo website-yo waaweyn.
3. Αποθηκεύστε τη σελίδα adoo gujinaya Keydinta, Cusbooneysiinta ama Daabacaadda. Muujinta mawduucaaga waa wax jawaab ah, wax walba waa inay shaqeeyaan.
Waxaad ku από kartaa koodh isku mid ah qoraalka qoraalka ah ee bogag kala duwan iyo goobaha widget-ku ku xiran yahay mawduucaaga.
Hada internetkaagu wuxuu kuugu soo bandhigayaa kalendarkaaga dhammaan taariikhaha iyo dhacdooyinka muhiimka ah ee ku dhex jira.
Ημερολόγιο Google Munaasabadaha
Hab kale oo lagu daboolayo jadwalkaaga waa inaad soo dejiso plugins oo aad isticmaasho si ay u habeeyaan χρονοkaaga. Το Ημερολόγιο Google της Munaasabadaha waa mid ka mid ah plugin ah. Qalabkani waa mid wax ku ool ah, waxaadna u arki kartaa dhacdooyinka qaabka bil walba ama qaabka liiska, xitaa laga bilaabo qalabkaaga κινητό. Jadwalada isku dhafan waxaa lagu από karaa hal sawir. Bandhigga munaasabadaha munaasabadda waxaa lagu dhejin karaa calaamado sahlan iyo iyada oo aan la isticmaalin koodhka.
Waxaad ka heli kartaa jadwalka dadweynaha adoo adeegsanaya plugin. Munaasabadaha soo noqnoqda, sanduuqa raadinta munaasabadaha, taariikhda iyo waqtiga qaabka iyo munaasabadaha gaarka ah ayaa dhammaantood la dhejin karaa.
Qorshahan wuxuu kaa joojin doonaa baahida loo qabo maareynta arimaha kala duwan.
Qaybta lacagta caymiska ee Google ayaa sidoo kale la heli karaa. Noocani wuxuu isticmaalaa isku xirnaan sugan oo u dhexeeya Google iyo website-kaaga. Noocyo muuqaal ah oo badan ayaa loo isticmaali karaa στο lagu daro lifaaqyada, macluumaadka martida ama urur dhacdo. Cusbooneysiinta waa mid toos ah.
Στο aad haysato πρόγραμμα taariikheed oo ku yaal shabakadaada waa habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan si aad uhesho xubnaha kooxda ama bulshada ku wargeliya dhacdooyinka muhiimka ah ama soo socda. Waxay kaa caawineysaa inaad maareyso dhacdooyinka hal meel. Isku Day oo arag naftaada sida jadwalka ku-meel-gaarka ah ay u sahlanaato wax-qabad ahaan adoo isku dayaya dhammaan dhacdooyinkaaga hal shaashad.
Kalandarkaarku waa qalab vaha ku ool ah oo bixiya macluumaadka bulshada, iskuduwidda hawlaha kooxeed,
Kalandarkaarku waa qalab vosak ku ool ah oo bixiya macluumaadka bulshada, iskuduwidda hawlaha kooxeed,
Kalandarkaarku waa qalab vax ku ool ah oo bixiya macluumaadka bulshada, iskuduwidda hawlaha kooxeed,
Kalandarkaarku waa qalab wax ku ool ah oo bixiya macluumaadka bulshada، iskuduwidda hawlaha kooxeed،
Kalandarkaarku waa qalab שעווה ku ool ah oo bixiya macluumaadka bulshada, iskuduwidda hawlaha kooxeed,
Kalandarkaarku waa qalab viasz ku ool ah oo bixiya macluumaadka bulshada, iskuduwidda hawlaha kooxeed,
IX वेब होस्टिंग की समीक्षा
15 nauðsynlegar viðbætur fyrir sjálfstætt rithöfundar
5 nagy ok, amiért a bloggerek saját maguk közzéteszik egy könyvet
10 hihetetlen és vicces 404 hibaoldalt tartalmazó gyűjtemény
4 ogledna pisma koja pretplatnike pretplatničke liste pretvaraju u kupce
Szakértői interjú: Debbie Könyvesbíró arról, hogy a szociális jót hogyan segítik a blogolók
[Markaðskönnun] Kostnaður við byggingu vefsíðu: Áætlun byggð á topp 400 UpWork-frjálsum fyrirtækjum
ट्रावी प्लीजबोन रेटपोता गैस्टिगाडो और लर्नू कील अग्रोदी वियान कोमर्कन रेटपोटन
پنج روش برتر برای گرفتن علائم و خطاها در نوشتن شما
6 façons de rester en contact avec vos contacts SEO peuvent vous aider à gagner des partenariats durables
9 Κώδικες WordPress για να βελτιώσετε το ιστολόγιό σας και να βελτιώσετε το UX
10 osnovnih pravila za učinkovit Snapchat marketing
Comment afficher les messages associés sur les sites WordPress
Cara Menghentikan Spammer Di Situs WordPress Anda
მთავარი მასალები ქსელში: Folsleine fillnerhantlieding
WordPress kennsla: Hvernig á að búa til frábæra síðu Flip Plugin
Cara Nulis Lähetä blogi Pinunjul Nalika Donya Ngeculke Loose (Englannin Luar Sampeyan)
A “cumail sùil air earbsa làraich le Freshping”
25 Web stranica Aman Fonts Kanggo Web stranica Sampeyan
כיצד אמהות יכולות להרוויח מכירת מוצרים בבלוגים שלהן
Caso di studio: come Mike Moloney Bootstrapped FilterGrade
15 ძალიან ეფექტური მინიმალისტური თემები WordPress- ისთვის
Njira Zitatu Zosavuta Kukhazikitsa Sito web: Gawo ndi Gawo Woyambira Buku